MultiDyne သည် IBC2016 ရှိ High-Density, Configureable Fiber Transport ကိုအလေးထားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » MultiDyne IBC2016 မှာအမြင့်-Density, Configuration Fiber ပို့ဆောင်ရေး Accentuates
MultiDyne IBC2016 မှာအမြင့်-Density, Configuration Fiber ပို့ဆောင်ရေး Accentuates
နယူးတီထွင်လူငယ်ကဏ္ဍနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးအသင်း Fixed နဲ့အိတ်ဆောင်စနစ်များအကြားဗီဒီယို, အသံနဲ့ဒေတာနေရင်မြန်အောင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မလားဘယ်လို Enhance
Hauppauge, နယူးယော့, သြဂုတ်လ 31, 2016-MultiDyne ဗီဒီယိုကို & fiber optic စနစ်များထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု application များအတွက်ဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးချဲ့နှစ်ခုမကြာသေးမီက-မိတ်ဆက်ဖြေရှင်းချက်များရရှိနိုင်ကြေငြာလိုက်သည်။ ပိုပြီး modular options များမှတဆင့်အသုံးပြုသူများအတွက် Configuration တိုးမြှင့်အပြင်, MultiDyne'' s ကိုအသစ်သောတီထွင်မှုများမှာလည်း modular signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို-အဘို့လယ်ပြင်၌အမြင့်ဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏များပြားလှနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာရောနှောနိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်နှင့်ပွဲစဉ်လယ်ကွင်းများနှင့်ခရီးဆောင်ပူးတွဲ-တလျှောက်။
အမ်စတာဒမ်အတွက်လာမည့် IBC2016 ပြပွဲ (စက်တင်ဘာလ 9-13), အမှဧည့်သည်များမှာ MultiDyne မတ်တပ်ရပ်ဘုံသဘောတရားအဖြစ်ခြွင်းချက် signal ကိုသိပ်သည်းဆ, Multi-format နဲ့လိုက်ဖက်မှုနှင့်ကြမ်းတမ်းကြာရှည်ခံမှုထည့်သွင်းကြောင်း fixed နှင့်မိုဘိုင်း application များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝဠာတှငျ, ဒီနှစ်ခုအချက်များအကြားဗီဒီယို, အသံဖိုင်, ဒေတာနှင့်အာဏာရွေ့လျားဘို့အနိမ့်စရိတ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဗိသုကာပေါ့ပါးလေးကိုဆိုလိုသည်။
အခုတော့တင်ပို့, MultiDyne ရပ် 11.D40 မှာအောက်ပါတီထွင်မှုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်:
High-density ကိုအသံ, ဗီဒီယိုနှင့်အချက်အလက် signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် openGear ၎င်း module အသစ်စီးရီး
အခြေခံအဆောက်အအုံချို့တဲ့လယ်ပြင်တည်နေရာအဘို့အချက်နဲ့ high-သိပ်သည်းဆ, Ultra-ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အရွယ်မှာခွေးဘီလူး™ဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအပါအဝင်ခရီးဆောင်ယူနစ်တစ်ခုတိုးချဲ့ထား,
အပိုဆောင်း cabling မပါဘဲအချက်ပြစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်များအတွက် FiberSaver စီးရီးတစ်ခုတိုးချဲ့
"MultiDyne ထရပ်ကားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့အပေါ်သူတို့တစ်တွေစတူဒီယိုသို့မဟုတ်နေရာ၌ရှိကြ၏ရှိမရှိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လျော့နည်းအိတ်ကိုပိုမိုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေပါတယ် "ဟုဖရန့် Jachetta, သမ္မတကလည်း, MultiDyne။ "ဒီသစ်ကိုစနစ်များနည်းပါးလာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ် format နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့, ပေါ့ပါးလေးဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နောက်ဆုံးတွင်အသီးအသီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုမြင့်စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှု၏ပုံစံနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနိမ့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်အတွက်မြင်သာထင်သာအကျိုးခံစားခွင့်ကယ်တင်တတ်၏။ "
အဆိုပါ openGear အမည်ဖြင့်ယင်း၏ဖွင့်လှစ်ဗိသုကာနှင့်ပြောင်းလဲခြင်း, ဖြန့်ဖြူး, ကွန်ယက်များနှင့်အခြားအချက်ပြအပြောင်းအလဲနဲ့ applications များအနှံ့လိုက်ဖက်တဲ့အဘို့အ modular ဘောင် system ကိုအသုံးပြု terminal ကိုဂီယာရောင်းချသူထံမှတီထွင်မှု၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ IBC မှာ, MultiDyne''့openGear အသိုင်းအဝိုင်းမှအလှူငွေနှစ်ခု bi-directional လင့်များကိုထောကျပံ့ဖို့အသစ်သောဖိုင်ဘာကဒ်များရရှိမှုနှင့်အတူချဲ့ထွင် HD1080p 3Gb / s -SDI အချက်ပြမှုများ။ အလားတူကတ်များကိုလည်း AES နဲ့ Analog အသံ, Ethernet, ဒေတာနှင့် GPIO ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် 8 × 8 signal ကိုစွမ်းရည်မြှင့်ပေးထားပါသည်။
MultiDyne ဒါ့အပြင်သိသိသာသာယင်း၏ modular သိပ်သည်းဆနှင့် configuration တိုးပွားလာနေချိန်တွင်, တူညီတဲ့ပုံစံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချမှတ်ကြောင်းယင်း၏ openGear ဘောင်အသစ်ခရီးဆောင် counterparts တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အသုံးပြုသူများသည် High-သိပ်သည်းဆအကြား interoperate နိုင်စွမ်းပေးမည် openGear ကတ်များနှင့်ခရီးဆောင်လယ်ကွင်းယူနစ်စောင့်ကြည့်။
ခွေးဘီလူးသည်ထိုလယ်၌ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များအဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဘက်စုံသုံးနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်ထဲမှာမီနိုင်တဲ့တစ်ဦး 4K-သဟဇာတ, ရည်ရွယ်ချက်-built modular ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဗိသုကာတစ်ဦး Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း (3.5 "H ကို6x" W x ကို 12 "L) ကိုကြမ်းတမ်းဝင်း-ဒီဇိုင်းကြမ်းတမ်းမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်-နှင့်အတူ High-density ကို I / O စွမ်းရည်ကိုဆီးတားဖို့လက်ထပ်; တလွှားနှင့်စွယ်စုံ signal ကို compatibility HD-SDI ဗီဒီယို, အသံ, အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး, ထိန်းချုပ်မှုဒေတာ, တာလီချိုးနှင့်အာဏာလိုအပ်ချက်များကို။ ဒါဟာအစ 4K-သဟဇာတဖြစ်နှင့် openGear ကတ်များနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါပါရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကခွေးဘီလူး configuration ကိုတစ်ဦးပို့နှစ်ခုလုံးပါဝင်သည်နှင့်တစ်ခုတည်းဖိုင်ဘာကျော်အချက်ပြမှုများကိုရွှေ့ဖို့, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုသူများအပြန်ကိုလက်ခံရရှိ site ကိုမှာ modular openGear ကတ်များမှလယ်ပြင်ယူနစ်ကနေအချက်ပြသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်ယူနစ်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါခွေးဘီလူးအားကစားတစ်ခုသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့သောဗီဒီယို / အသံအခြေခံအဆောက်အအုံချို့တဲ့ဝေးလံသောနေရာများနှင့်ကနေ signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ကြောင်း ENG applications များအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အသုံးပြုသူတစ်ဦးတစ်ဦးဘောလုံးဂိမ်းပြင်ပပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦးဂေါက်ကွင်းတစ်လျှောက်ခွေးဘီလူး drop တစ်ထရပ်ကားသို့မဟုတ်စတူဒီယိုထဲကနေထိုးသွင်းပါဝါနိုင်ပါတယ်။ လယ်ပြင်အင်ဂျင်နီယာရိုးရှင်းစွာခံယူတည်နေရာအချက်ပြပြန်လာဖို့ခွေးဘီလူးသို့မိုက်ခရိုဖုန်း, ကင်မရာနှင့် / သို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုဂီယာပလပ်ထိုးပေးရ။
အဆိုပါခွေးဘီလူးရဲ့ modular ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ alignment ကို၎င်း၏ openGear စီးရီးအပါအဝင်အချက်ပြမှုလမ်းကြောင်းနှင့်ပူ-လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကတ်များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါကခွေးဘီလူးလယ်ကိုဖြန့်ကျက်ခြင်း, ဘုံ၏တိုးမြှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက်ကိုဆိုလို MultiDyne ဗိသုကာအသုံးပြုသူများကိုလက်ခံရရှိတည်နေရာမှာကျော openGear ကတ်များသုံးစွဲဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။ openGear ဘောင်နှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါ, အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းအဆုံးမှအဆုံးသို့ signal ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းတစ်ခု openGear-compliant ကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကိုပေါင်းစပ်၏ထို option ရှိသည်။
MultiDyne ထို့အပြင်ပြီးသားလူကြိုက်များတဲ့ FiberSaver လိုင်းတစ် 12Gb / s ကိုဗားရှင်းမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါ FiberSaver-12G အားလုံးကျစ်လျစ် 36RU ဘောင်ကနေနှစ်ခုအမျှင်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် 1 optical အချက်ပြမှုများတက်ကိုလက်ခံတော်မူမည် အဆိုပါ 6- နှင့် 12-ရုပ်သံလိုင်းဗားရှင်းစတုရန်း, 1 ¾လက်မရုံငါးလက်မဖို့အိုးအိမ်ကိုလျော့ချနေစဉ်။ အဆိုပါ FiberSaver-12G လည်း 3Gb / s ဖြင့်သဟဇာတဖြစ်နဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ 1.5Gb / s ကိုအချက်ပြများနှင့် 18 မှတက်ချပြီးများအတွက်စံပြဖြစ် SMPTE လှိုင်းအလျားကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲတဦးတည်းဖိုင်ဘာပေါ်သို့ကင်မရာသို့မဟုတ် IP အချက်ပြမှုများ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံးဖိုင်ဘာသိုလှောင်ထိန်းသိမ်းသူများအားမသက်ဆိုင်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ပုံစံ၏, မည်သည့် optical, ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
အတှေ့အကွုံ 40 နှစ်ကျော်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့လူငယ်ကဏ္ဍနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, MultiDyne ဗီဒီယိုကို & fiber optic စနစ်များရှေ့ဆောင် signal ကိုပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွင်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်နှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် fiber-optic-based သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ, cable ကို, ဂြိုဟ်တု, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ, လိုလားသူတစ်ဦးက / V ကို, ကော်ပိုရိတ်, လက်လီ, စောင့်ကြည့်, teleconferencing, တရားစီရင်ရေး arraignment, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အစိုးရ, စစ်တပ်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစျေးကွက်။
Dimension PR စနစ်
Dimension PR စနစ်ဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားအလယ်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှ Hitachi 4K ကင်မရာများသည်လက်ဖြင့်အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည် - ဇူလိုင်လ 16, 2020
ENCO WebDAD သည် Baker Broadcasting အတွက်အဝေးထိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအသစ်များကိုဖွင့်သည် - ဇူလိုင်လ 2, 2020
Xilica သည် 'Genius' ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင်တန်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည် - မေလ 11, 2020
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ fiber-optic MultiDyne ထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယို ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-08-31
ယခင်: ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဆန်ဖရန်စစ္စကို
နောက်တစ်ခု: Lectrosonics, DPA မိုက်ကရိုဖုန်း, အသံဖုန်းများအတွက်နှင့် K-Tek အဆိုပါအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေး Los Angeles မြို့ Host မှ